Dhawunorodha nyowani yepepuru iPhone 12 Wallpaper | IPhone nhau
Tiri zvizere Keynote hangover, a Keynote kwatakaona zvigadzirwa zvainge zvatotaurwa nezvazvo zvakawanda ... Tine nyowani (uye yakajeka) iMacs ine M1 processor, inoshamisa iPad Pro iyo zvakare inobatanidza huwandu hwemidziyo neiyo nyowani M1 processor Apple, a yakasimudza Apple TV 4K, all inoshuvira maAirTag, uye sechipo Apple yakawedzera ruvara rutsva kune huwandu hweiyo iPhone 12. Yaive isiri pane runyorwa rwemakuhwa asi Apple yakangotangisa nyowani iPhone 12 yepepuru ruvara. Ramba uchiverenga nekuti ipapo isu tinokusiya iwe yepamutemo Wallpaper yeiyi nyowani yepepuru iPhone 12.
Zvinofanira kutaurwa kuti tiri kutaura nezvepepuru (sezvakarongedzwa neApple mune yayo Spanish vhezheni) asi isu tingave tichitaura nezve a iPhone 12 yepepuru, violet, kana chero chaunoda kuitumidza. Iyo iPhone 12 iyo ine ruvara nyowani asi ichiri iyo yakafanana iyo iPhone 12 iyo yatakaona pakupera kwegore rapfuura. Vanosunungura chitubu chevara izvo zvine chokwadi chekufarirwa nevazhinji vashandisi.
Dhawunorodha iyo nyowani yepepuru (kana yepepuru) iPhone 12 Wallpaper
Kuti utore pasi mutsva uyu unofanirwa kutevedzera nhanho idzi dziri nyore:
Sarudza imwe yemapikicha matsvaSezvo iri kumashure iyo inoenderana nerima ruvara rweiyo system, isu tinokusiira iwe maBhaibheri maviri, hongu, sezvo isu tiri kurodhaunirodha zvakasiyana, aya mashure haazoshanduke otomatiki, unofanirwa kusarudza imwe yeiri.
Dhinda uye ubatisise kumashure kwakasarudzwa uye sarudza sarudzo "Wedzera ku Mifananidzo".
Pinda iyo Zvirongwa app, Wallpaper, Sarudza nyowani nyowani, uye tsvaga iyo yakadzoserwa kumashure mune iyo iPhone Mifananidzo maforodha.
Iwe unogona zvakare kusarudza kumashure kubva kuApp photos uye sarudza iyo yaunoda.
Nyore matanho ayo pasina mubvunzo ichapa mudziyo wako chitarisiko chitsva, kumashure iyo ine chokwadi chekubatana mune zvakaringana nemamwe mavara eimwe iPhone. Uye kwauri, Iwe unofungei nezve iyi nyowani yepepuru iPhone 12?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 12 » Dhawunorodha nyowani yepepuru iPhone 12 Wallpaper
Apple TV 4K (2021): Diki Huru Shanduko